Ny “Première Agence de Microfinance” Madagascar
Ny “ Première Agence de Microfinance (PAMF)” Madagasikara dia natsangan’ny “Agence Aga Khan pour la microfinance(AKAM) » tamin’ny taona 2006 ho orinasa tsy miankina.
Ao anatin’ny “Réseau Aga Khan de développement (AKDN) » ny PAMF, izay miasa eo anivon’ny firenena mihoatra ny 25.
NY ASA HINADRAIKETAN’NY PAMF
Ny iraka napetraka tamin’ny PAMF dia hamongotra ny fahantrana et Madagasikara, ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo olona sahirana sy marefo ara-pivelomana amin’ny alàlan’ny fanamorana ny fahazoana ireo vahaolana ara-bola izay mifanaraka amin’ny sehatry ny varotra misy eo an-toerana. Noho izany dia manampy ny mpanjifa izahay hahazaka tena ary hahazo ny fahaiza-manao ilainy ahafahan’izy ireo miditra ao amin’ny tambajotra ara-bola mahazatra.
NY VINAN’NY PAMF
Ny fenitra tratrarina dia mba ho mpamatsy tolotra ara-bola misongadina i PAMF eto amin’ny Nosy, ka handray anjara mivantana amin’ny fampihenana ny fahantrana eo anivon’ny firenena sy ny fampandrosoana ara-toekarena amin’ny alàlan’ny famatsiana vokatra sy tolotra ara-bola maharitra.
Miisa 270 ireo mpiara-miasa matihanina izay mifanolo-tanana sy mandray anjara mavitrika hahazoana vokatr’asa tsara ho fampiroboroboana ny orinasa. Izany dia natao hanomezana fahafaham-po hatrany ireo mpanjifa.
o	Firaisan-kinan’ny rehetra: Manolotra vahaolana ara-bola azon’ny rehetra idirana, indrindra fa ireo izay voailika sy mitoka-monina
o	Fahamendrehana sy fanajana: Miaro ny tombontsoan’ny mpanjifa, izay voasokajy ho mponina sahirana sy marefo eo anivon’ny fiaraha-monina
o	Fizakan-tena: Manampy ny olona hanampy ny tenany. Manolotra fahafahana ho azy ireo hampivelatra ny fahaiza-manaony rehetra mba hahatonga azy ireo hahaleotena ara-bola.
o	Fangorahana: Mihaino ny mpanjifa mba hahafantarana ny filàn’izy ireo ary hahafahana mikendry tolotra mifanaraka amin’ny zavatra ilainy
o	Manamora ny fidirana amin’ny vokatra sy ny tolotra ara-bola izay manana kalitao mifanaraka amin’ny fianakaviana sy ny mpandraharaha madinika
o	Manombana ny fiantraikan’ny asa atao amin’ny kalitaon’ny fiainan’ny mpanjifa
o	Mampaharitra ny asa atao amin’ny alàlan’ny fahaizana mitantam-bola sy ny fidiram-bola maharitra.
o	Mampivelatra ny fahaiza-manao an’ireo mpiasa, izay loharanon-kevitra sarobidy indrindr.
IREO MPIARA MIOMBON’ANTOKA
NY EKIPA MPITANTANA
Ny PAMF dia faly manolotra ireo ekipa mandrafitra ny fitantanana izay manara-maso ny ezaka ataon’ny orinasa ary miantoka ny fahombiazan’ireo mpiara-miasa rehetra.
sy ny asa rehetra atao
Digitalisation et Transformation Bancaire
« Prenez soin de vos données et elles prendrons soin de votre business »